SME Archives - Business Centric Network (BCN)
SME Member Card လြှောကျထားပေးခွငျး
April 3, 2020 May 1, 2020 San Thida
SME Member Card လြှောကျထားပေးပါသညျ။ အခကျြအလကျမြားပွညျ့စုံပါက အမြားဆုံး (၁) လခနျ့ကွာပါမညျ။ လိုအပျသောအခကျြအလကျမြား လုပျငနျးရှငျ၏ဓါတျပုံ (အပွာနောကျခံ) လြှောကျထားသော လုပျငနျးရှငျ၏ မှတျပုံတငျ၊ သနျခေါငျစာရငျး၊ ကိုယျရေးအခကျြအလကျမြား၊ နရေပျလိပျစာ လုပျငနျးမှတျပုံတငျ (သို့) ကုမ်ပဏီမှတျပုံတငျ လုပျငနျးလိပျစာ မတညျရငျးနှီးငှေ လုပျငနျးစတငျသညျ့ခုနှဈ ဝနျထမျးအငျအား လုပျငနျးအမှတျတံဆိပျ ပွီးခဲ့သညျ့နှဈ၏တဈနှဈဝငျငှေ ဝနျဆောငျခ နှဈသောငျးကပျြ နှငျ့ member fees (5200 for small, 10200 for medium) 09977160671 အခွားဝနျဆောငျမှုမြား ကှနျပွူတာစာရငျးကိုငျစနဈ #MSMEBooks နှဈခြုပျစာရငျးမြားရေးဆှဲပေးခွငျး အခှနျဆိုငျရာရှငျးတမျးမြားလုပျဆောငျပေးခွငျး လုပျငနျးမှတျပုံတငျပေးခွငျး #BCN #MSMEBooks #SMECard
Accounting, Accounting Software, Cloud, MSME Books, SME
ကုနျပစ်စညျးကုနျကစြရိတျတှကျခကျြခွငျး Freight-in @ MSME Books
September 13, 2019 BCN Support
MSME Books တှငျ ကုနျပစ်စညျးမြား ဝယျယူရာတှငျ ကုနျဖိုးအပွငျ အခွားသော ကုနျဝယျရာတှငျ ကသြငျ့သညျ့ ကုနျကစြရိတျမြား အား ကုနျပစ်စညျး၏စရိတျ အဖွဈ ထညျ့သှငျးတှကျခကျြလိုပါကလညျး Purchase Invoice တှငျ ထညျ့သှငျးနိုငျပါသညျ။ ကုနျပစ်စညျးမြားအားဝယျယူရာတှငျကုနျကစြရိတျအားတှကျခကျြရနျအတှကျ ကုနျပစ်စညျးအားဝယျယူရာတှငျထိုပစ်စညျး၏ကုနျကစြရိတျအားတှကျခကျြရနျအတှကျ အဝယျဘောငျခြာထညျ့သှငျးရာတှငျထိုကုနျပစ်စညျးဝယျယူရာတှငျကသြငျ့သညျ့ကုနျကစြရိတျမြားပါထညျ့သှငျးရမညျ။ အဝယျစာရငျးအားထညျ့သှငျးရနျအတှကျ Purchase Invoices ကိုနှိပျပါ။ New Purchase invoice ကိုနှိပျပါ။ Purchase date ၊ Supplier name၊ itemတှငျ ဝယျယူသညျ့ကုနျပစ်စညျးအမညျအားရှေးခယျြပါ။ Qty တှငျကုနျပစ်စညျးဝယျယူသညျ့အရအေတှကျအားထညျ့သှငျးပါ။Unit Priceတှငျထိုပစ်စညျး၏တနျဖိုးအားထညျ့သှငျးပါ။ ထိုပစ်စညျး၏ကုနျကစြရိတျအားထညျ့သှငျးတှကျခကျြရနျအတှကျ "Add line" ကိုနှိပျ၍စာကွောငျးထပျတိုးပါ။ ထပျတိုးထားသညျ့စာကွောငျး၏ "Item" အကှကျတှငျ "Freight-in" အားရှေးခယျြပါ။ "Unit price" တှငျ ကုနျပစ်စညျးအားဝယျယူရာတှငျအခွားသောကသြငျ့သညျ့ကုနျကစြရိတျစုစုပေါငျးတနျဖိုးအားထညျ့သှငျးပါ။ "Create" ကိုနှိပျပါ။… Continue reading ကုနျပစ်စညျးကုနျကစြရိတျတှကျခကျြခွငျး Freight-in @ MSME Books
Tagged Freight-inLeaveacomment
Accounting Software, MSME Books, SME
ငှစောရငျးမြား သတျမှတျခွငျး(ငှစောရငျးစာအုပျမြား) Cash Books @ MSME Books
September 7, 2019 September 11, 2019 BCN Support
MSME Books တှငျ ငှစောရငျးစာအုပျမြား သတျမှတျရနျအတှကျ "ငှစောရငျးမြား" တှငျ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ငှစောရငျးစာအုပျ တဈအုပျကို စာရငျးခေါငျးစဉျ တဈခု (သို့) ငှစောရငျးစာအုပျ အားလုံးအတှကျ စာရငျးခေါငျးစဉျ တဈခု လိုအပျသလို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ငှစောရငျး စာအုပျ တဈအုပျကို စာရငျးခေါငျးစဉျ တဈခု သတျမှတျလိုပါက စာရငျးခေါငျးစဉျသတျမှတျရာတှငျ "ထိနျးခြုပျစာရငျး" အဖွဈ သတျမှတျပေးရပါမညျ။ ငှစောရငျးမြား သတျမှတျရနျအတှကျ... "ငှစောရငျးမြား" ကိုနှိပျပါ။ "ငှစောရငျး အသဈ"ကိုနှိပျပါ။ "အမညျ" တှငျ ထားရှိလိုသော စာရငျးအမညျကိုထညျ့သှငျးပါ။ 'ငှကွေေး"တှငျအခွခေံ ငှကွေေးကို အသုံးပွုမညျဆိုပါက ရှေးခယျြစရာမလိုပါ။ "ထိနျးခြုပျစာရငျး"တှငျ သကျဆိုငျရာငှစောရငျးကို ရှေးခယျြပါ။ "ဖနျတီးမညျ"ကိုနှိပျပါ။ ထညျ့သှငျးထားသော ငှစောရငျးစာအုပျကို တှရေ့မညျ။ အခွား ငှကွေေးယူနဈဖွငျ့ ငှစောရငျးစာအုပျထားရှိလိုပါက... အမညျတှငျ ထားရှိလိုသော… Continue reading ငှစောရငျးမြား သတျမှတျခွငျး(ငှစောရငျးစာအုပျမြား) Cash Books @ MSME Books
Tagged Cash BookLeaveacomment
Accounting, Accounting Software, MSME Books, Multi Currency, SME
MSME Books Demo
July 28, 2019 July 27, 2019 San Thida
?လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းမှာ Accounting Software အသုံးပြုချင်တယ်။ ?အသုံးမပြုမီမှာလည်း လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊မရှိသိလိုတယ်ဆိုရင် လူကြီးမင်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ ကြိုတင် Appointment ယူပြီး Online Demo ကြည့်လို့ရပါပြီ။ ?Demo အတွက် လူကြီးမင်းလုပ်ငန်း ရဲ့ လက်ရှိလည်ပါတ်နေပုံကို အရင်ဆုံး လိုအပ်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ မေးပါမယ်။ ?မေးခွန်းလေးတွေဖြေပေးဖို့အတွက်တော့ မိနစ် ၃၀ခန့် အချိန်ပေးရပါမယ်။ ?လိုအပ်တာတွေ သိပြီးတာနဲ့ Sample Data ပြင်ဆင်ပါမယ်။ ?အချိန် တစ်ရက် လောက်တော့ လိုပါတယ်။ ?Demo ကြည့်ဖို့ အတွက်ကတော့ အချိန် ၁နာရီလောက်ပေးရင် ရပါပြီ။ ?လူကြီးမင်းအနေနဲ့ Demo ကြည့်မယ်ဆိုရင် viber: 09 977 160 671 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ။ *** ?လူကွီးမငျးတို့ လုပျငနျးမှာ… Continue reading MSME Books Demo
Accounting, Business, Entrepreneurship, Management, SME
Bad Debts @ MSME Books
January 11, 2019 San Thida
နှဈကုနျတော့မယျ အကွှေးတှတေောငျး မရ တဲ့ အခါ ဘယျလိုစာရငျးသှငျးမလဲ *** နှစ်ကုန်တော့မယ် အကြွေးတွေတောင်း မရ တဲ့ အခါ ဘယ်လိုစာရင်းသွင်းမလဲ *** လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ အနည်းနဲ့ အများတော့ ကြွေးဆုံးတာတွေရှိပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်ကုန် တဲ့ အခါ တောင်းမရတော့ပဲ ကြာနေတဲ့ အကြွေးတွေကို ကြွေးဆုံးအနေနဲ့ စာရင်းသွင်းရပါမယ်။ ကြွေးဆုံးကို လုပ်ငန်းရဲ့ စရိတ်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြွေးဆုံးကို စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေအရ ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ကြွေးဆုံးစာရင်းသွင်းခွင့်ရှိတယ်၊ ဘယ်လိုအထောက်အထားတွေလိုတယ်ဆိုတာကို သိရပါမယ်။ ကြွေးဆုံးက လုပ်ငန်းရဲ့ စရိတ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် စာရင်းခေါင်းစဉ် အသစ်တစ်ခု မရှိသေးရင်ထည့်ရပါမယ်။ Settings >> Chart of Accounts ကိုနှိပ်ပါ။ *** လုပျငနျးတိုငျးမှာ အနညျးနဲ့… Continue reading Bad Debts @ MSME Books
Business, Digital Accountant, SME, Success
Why do we need Accounting in Business?
November 27, 2018 November 27, 2018 San Thida
အသေးစားကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တိကျသောငွေကြေးစာရင်းရှင်းတမ်းစာအုပ်မရှိမဖြစ်ထားရှိရန်လိုအပ်ပုံ မည်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်မဆို ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေးစာရင်းရှင်းတမ်းစာအုပ် ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ နှမြောစရာကောင်းသည်က ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင် စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးသမားများကပင် ထိုအချက်ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။ အလွန်တော်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ManishSoni မာနစ်ခ်ျဆိုနီက အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ကာ သုံးနှစ်အကြာတွင် အထူးအောင်မြင်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် သူသည် ငွေအဝင်အထွက်မှတ်တမ်းများ သိမ်းထားရန်အတွက် စာရင်းတစ်ခုကိုထားရှိသည်။ ထိုစာအုပ်ထဲတွင် သူ၏ဝယ်သူများထံမှပြန်ရရန်ငွေ၊ ရောင်းကုန်သည့်ငွေ စသည့် အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများကိုသာ မှတ်သားထားလေသည်။ ယခုအချိန်၌ သူသည် လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက် ဘဏ်တစ်ခုမှလိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများကိုယူခဲ့ရာ မထင်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ထိုဘဏ်မှငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ထိုအခါသူသည် နောက်ထပ်နိုင်ငံတော်မှ အခွန်အခများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ခန့်မှန့်နိုင်စွမ်းမရှိတော့သည့်အပြင် အခြားသောငွေစာရင်းမှတ်တမ်းများမှာလည်း သူ့လက်ထဲတွင်မရှိတော့ပေ။ ဘဏ်မှလည်း နောက်ထပ်ငွေတိုးချေးများကို သူ့အားခွင့်မပြုတော့ပေ။ ပိုဆိုးသည်ကသူ၏ ဝင်ငွေအခွန်များကို မှန်ကန်မှုရှိ၊… Continue reading Why do we need Accounting in Business?
Accounting, Business, SME
November 14, 2018 November 14, 2018 San Thida
MSME Books ကို Nov 16-17 မကွေးမြို့ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံနားမှာ ပြုလုပ်မည့် SME များ၏ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပွဲတော်ကြီး မှာ လာရောက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ MSME Books ဆိုတာ လစဉ်ကြေး ၃၀,၀၀၀ ကျပ်ကနေ စတင်အသုံးပြုနိင်တဲ့ ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင် စနစ်တစ်ခုပါ။ *** MSME Books ကို Nov 16-17 မကှေးမွို့ ဗိုလျခြုပျပနျးခွံနားမှာ ပွုလုပျမညျ့ SME မြား၏ ကှနျယကျခြိတျဆကျပှဲတျောကွီး မှာ လာရောကျလလေ့ာဖို့ ဖိတျချေါပါရစေ။ MSME Books ဆိုတာ လစဥျကွေး ၃၀,၀၀၀ ကပျြကနေ စတငျအသုံးပွုနိငျတဲ့ ကှနျပွူတာသုံးစာရငျးကိုငျ စနဈတဈခုပါ။
#Accounting_for_Entrepreneur ⁉️မိတ်ဆွေ သင်က လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသူလား။ ⁉️စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရသလား။ ⁉️ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ရှာဖို့အခက်ကြုံနေလား။ အထက်ပါ အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ??ဖြေရှင်းပေးမည့် ☁️?MSME Books ကို Business Centric Network က မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ☁️?MSME Books နဲ့ မိတ်မဆက်ခင်မှာ ဘာကြောင့် ☁️???Clouded Based Computerized Accounting Software (ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင်စနစ်) ကိုလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးသင့်သလဲ ဆိုတာလေးကို အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁) ?Spreadsheet သုံးနေတာ လုပ်ငန်းအတွက် မလုံလောက်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ ?Spreadsheet အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလဲ ?လယ်ဂျာစာအုပ်တွေ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ?Spreadsheet (သို့ ) ?လယ်ဂျာစာအုပ်တွေ အသုံးပြုကြတာ ဘာမှ မရှိတာနဲ့… Continue reading MSME Books
Accounting, Business, Cloud, Digital Accountant, Entrepreneurship, SME
November 10, 2018 November 9, 2018 San Thida
???သင်သိပြီးပြီလား??? အသေးစားလုပ်ငန်းတွေအတွက် နှစ်ကုန် စာရင်းချုပ်တဲ့အခါ ?Audited Reports မလိုတော့ပါဘူး။ ?Audited Reportsတွေမလိုတော့ပေမည့် နှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာ ?လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကိုတော့ တင်သွင်းပေးရပါမယ်။ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထား မယ်ဆိုရင်တော့ ✳️ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစာရင်း ✳️လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမှုစာရင်း ✳️ကုန်ပစ္စည်းအဝယ်စာရင်းနှင့်လက်ကျန်စာရင်း ✳️နေ့စဉ် လက်ငင်းရောင်းစာရင်း ✳️နေ့စဉ် အကြွေးရောင်းစာရင်း ✳️အထွေထွေအသုံးစရိတ်စာရင်း ✳️ဝန်ထမ်းလစာ ✳️ရရန်ရှိစာရင်း ✳️ပေးရန်ရှိစာရင်း ✳️ငွေသားလက်ကျန်စာရင်း ✳️ဘဏ်လက်ကျန်စာရင်း ✳️လစဉ်အရှုံးအမြတ်စာရင်း စတာတွေထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ⏺️စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ✍️လက်ရေးစာရင်းကိုင်စနစ် ?‍?Excel ဖြင့်စာရင်းရေးသွင်းခြင်း ?ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင်စနစ် အသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ?ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင် စနစ် နဲ့ ✍️လက်ရေးစာရင်းကိုင်စနစ်ရဲ့ အဓိက ကွာခြားချက် ✍️လက်ရေးစာရင်းကိုင်စနစ်မှာ ?လယ်ဂျာစာအုပ်တွေစာရင်းသွင်းပြီး အစီရင်ခံစာများ ကြည့်ရှု့နိုင်ရန်အတွက် လယ်ဂျာစာအုပ်မှ စာရင်းများကို ကူးယူပြီး လိုအပ်သော အစီရင်ခံစာများ… Continue reading Accounting for Entrepreneurs
Accounting, Business, Digital Accountant, Entrepreneurship, Management, SME, Success
November 8, 2018 November 8, 2018 San Thida
? #MSME_Books ?နိုဝင်ဘာလ (၁၆) နဲ့ (၁၇) မှာ မကွေးမြို့မှာ ကျင်းပမည့် Entrepreneur Day လုပ်ငန်းရှင်များကို အားဖြည့်ပေးဖို့ Business Centric Network @ BCN ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တွေဖြစ်တဲ့ MSME Books @ Accounting Solution for Micro, Small and Medium Enterprises Digital Accountant စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများ ကို လာရောက်လေ့လာ ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ?လုပ်ငန်းတိုင်း စနစ်တကျရှင်သန်ကြီးထွားဖို့ အတွက် ဆိုရင် "စာရင်းဇယား" တွေကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ?#MSME_Books ဆိုတာ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ စာရင်းဇယားတွေကို နည်းပညာ အကူအညီနဲ့… Continue reading MSME Books